Kudhawaad 100 Askari oo Shisheeye u badan oo Dhimasho iyo Dhaawac ku noqday Shabeellaha Hoose. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Kudhawaad 100 Askari oo Shisheeye u badan oo Dhimasho iyo Dhaawac ku noqday Shabeellaha Hoose.
On Mar 17, 2020 793 0
Faafahinno isdaba joog ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashey weeraradii shalay ciidamada Shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka lagula eegtay inta u dhexeysa deegaanka Buufow iyo degmada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ugu yaraan 52 askari oo u badan ciidamada Uganda ayaa ku dhintay camaliyad Nafhurnimo ah iyo weeraro xiriir ah oo ay la kulmleen, halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen 35 askari oo iyagana u badan ciidamada Shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka.
Dagaallada iyo howlgallada dhacay shalay ayaa ahaa kuwa xoogan oo khasaare ba’an lagu gaarsiiyay askarta Shisheeyaha gaar ahaan kuwa ka socda wadanka Uganda, iyo ciidamada ay tababareen Turkiga iyo Maraykanka ee wehlinaya Shisheeyaha.
Diyaarado dagaal ayaa saaka kasoo degay deegaanka Buufow, kuwaas oo qaaday meydadka iyo dhaawacyada ciidamada Shisheeyaha, waxaana hadda kala yaac laga dareemayaa gulufkii Shisheeyaha.
Warar aanu heleyno ayaa xaqiijinaya in ugu yaraan 30 askari oo katirsan ciidamada dowladda federaalka ay ka firxadeen degmada Janaale, isalamarkaaana ay aadeen dhanka magaalada Marko, sababo ku aadan xaaladda ku heysata Jannaale oo ah mid cakiran.
Dagaalladii shalay marka laga soo tago askarta tirada badan ee lagu gumaaday, waxaa lagu gubay gawaari dagaal oo lix gaaraya, kuwaas oo labo kamid ah ay Taangiyo ahaayeen, waxaana si gaar ah taangiyada u haleelay weerarka Nafhurnimada ah.
admin 384 posts 0 comments
Dhegeystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor…
Prev	Next 1 of 2,143